Maitiro ekuwana mari yedhijitari neBinance Liquid Swap - Cazoo
musha » musha » Maitiro ekuwana mari yedhijitari neBinance Liquid Swap
Tag: Binance Liquid Chinja, kusingaperi kurasikirwa, liquidity mupi, kusingaperi kurasikirwa, Liquidity dziva, Stablecoin, Ipai, Rairira kurima
Kana ino inguva yako yekutanga pano, gamuchira / gamuchira!
Pano paCazoo ndinonyora zvinyorwa zvangu parwendo rwangu kuenda kune ino yese-pasi-pane-dongo nyika ye cryptocurrencies. Nei ndichizviita? Sei ndisingazvichengetere kwandiri? Nekuti Kugovera kune Kuchengeta! Zvese zvandakadzidza, ini ndakadzidza nekuverenga mumwe munhu kana nekubvunza zvemumwe munhu zvemukati. Nguva yekudzorera kunharaunda.
Unoonga here? Saina Binance, kana usati wanyoresa, nekodhi yangu yekutumira! Chitupa changu chekutumira ndiEIXFBK06, kana unogona chete tinya pano.
Sezvambotaurwa, Cazoo inyanzvi, handisi chipangamazano wezvemari. Usaite chikanganiso chekudyara mari yausingakwanise kutenga. Mari yekudyara ine njodzi huru: kana ukasangwarira unorasa mari yako, unonetsekana nekuita mashandiro aunoda kutevera. Ini ndinogona chete kukupa iwe zano rimwe, chenjera / chenjera.
Chii chinonzi Binance Liquid Swap
Binance Liquid Swap inosarudza sei mutengo wecryptocurrencies?
Nei Binance Liquid Shanduko?
Iyo Binance Liquid Swap inoshanda sei?
Iwe unoita sei mari neiyo Liquidity Swap?
Marii yakawanda zvakadii mukupa mvura kune vaviri crypto currency?
Ndekupi kwaunoona iwe kuwana uye kurasikirwa?
Binance Liquid Swap yakavakirwa pane musimboti, unoshandiswa zvakanyanya mukati meDeFi nyika, ye "liquidity dziva" (Liquidity Dziva) kutengesa macryptocurrencies.
Mutengo we crypto ichave yakatarwa nehuwandu hwemakristpto mari mudziva remvura.
Maitiro eBinance Liquid Swap inosarudza mutengo wecryptocurrencies?
Binance Liquid Swap inoshandisa yakakosha fomula kuona mutengo wekutengesa uye mutengo pakati pemaviri madhijitari. Ndiani Anopesvedzera Mitengo yeCrypto? Vatengesi, iyo inoshandura kana kuwedzera mari kudziva remvura. Saizvozvo, vatengesi vanowedzera nekubvisa mari kubva mudziva remvura vanobatanidzwa mukugadzira musika (mune jargon isu tinowanzoverenga AMM, Yega Musika Mugadziri).
Kubudikidza neBinance Liquid Swap, avo vanoda kuita hunyanzvi pakati pekrispto mari vanogona kuchinjanisa navo nekukurumidza. Asi handizvo chete!
zvinoitawo tsvaga mubereko nekuwedzera kushomeka mudziva.
Chinjana mari yemadhora mumasekondiZvidiki zvidiki hazvigone kuburitsa chero kupararira panguva ino maitiro, nepo kuita kukuru kuchizoideredza zvakanyanya slippage kuburikidza nekuchinjana. Vatengesi vanogona kunakidzwa nemitengo yakatsiga uye makwikwi emakomisheni.
Wedzera mari uye uwane mubereko kubva mukubataVatengesi vanowedzera kushomeka padziva vanowana chikamu chemari inoburitswa nemidziyo yedziva uye vanofarira kufarira mari yemadhora. Nota paz- Mari dzinogona kubviswa kubva mudziva zvichibva pakubata chaiko mudziva. Kubva pakubviswa zvinokwanisika kuwana mari mbiri dzevaviri vakasarudzwa nenzira yakaenzana, kana zvinokwanisika kusarudza kuwana imwe chete. Kana iwe ukasarudza kugamuchira imwe chete cryptocurrency, uchafanira kubhadhara mari yekutengesa, iyo ichatorerwa kubva pamari yaunowana.
Kutanga kushandisa iyo Binance Liquid Swap iwe unofanirwa kuenda kune Zvemari> Liquid Swap.
Binance: Zvemari> Liquid Swap
Mukati iwe uchaona maviri marudzi ezvigadzirwa: Yakasimba e utsanzi.
Chigadziko Chigadzirwa uye Innovatoin Chigadzirwa
Yakasimba inotaura nezve solidcoin liquidity madziva, akadai seBUSD neDAI.
utsanzi zvinoreva madziva emvura e zvinhu zvisina kusimba, senge ETH, BTC uye kunyangwe GBP, zvakare fiat mari.
Mushure mekuwedzera zviwanikwa zvako mudziva remari, iwe unozopihwa imwe mugove, iwe unozopihwa (chidiki) chikamu. Pese panoshandurwa chinowanikwa mukati medziva remvura, chikamu chemakomisheni uchapihwa iwe, zvichibva pane chako mugove, mugove wako. Nyore peasy.
Binance Liquidity Swap: Mugove wakawanikwa nekupa iwo iwo maricho
Pamusoro peLiquid Swap pane fungidziro yegoho, chimbadzo chakawanikwa, chevaviri vaviri vanogona kupihwa mari.
Kufungidzira kwegoho, kwegoho, kwemaviri emari
Iko kudzoka kwakazara kunoverengerwa zvichibva pane fomula inoratidza iyo mhindu yakabhadharwa zuro uye mari dzese dzekutengesa:
Fomula: (mubereko wakazara wakabhadharwa zuro + mari yekutengesa yakazara nezuro) / kukosha kwese kwedziva pakati pehusiku zuro * 365.
Kusvetuka pamusoro peimwe yemari mbiri kunoratidza iyo Kubereka Kuumbwa.
Mhindu uye kurasikirwa zvinoratidzwa mune Yangu Mugove chinhu uye zvinotengwa muUSD.
Maitiro Ekutarisa Yezvirimwa Zvekurima Revenue muBinance Liquid Shanduko
Kuva nekrispto yakamisikidzwa kusaita chero chinhu zvine musoro here? Kuvaroja kuti vagare vachiwana mari yekugara mu cryptocurrencies harisi zano rakaipa, haufunge?
Asi ramba uchifunga kuti Innovation's emvura emadziva ari pasi pekusagadzikana kwakanyanya, nekuda kwemitengo yekutsinhana kwemusika uye saizi yedziva. Izvi zvinhu zvinogona kukonzera kushanduka kukuru mukukosha kwawakaisa mari pamusoro pemaawa makumi maviri nemana.
Kunyangwe iwe ukave Liquidity Provider inogona kubatsira zvakanyanya, kurasikirwa kusingaperi chinhu chakakosha pfungwa kuti unzwisise, kuti urege kuisa panjodzi yekurasa zvese.
Tinotaura nezvazvo munguva pfupi.
Ini ndinokuyeuchidza kuti kana usati wanyora kuna Binance, unogona kuzviita vachinyanya paichibatanidza. Uye iwe une makomisheni yakaderedzwa ne20%, zvachose!
Nyaya yapfuuraMetamask: danho nedanho gwara kune yakanakisa chikwama cheDeFi
Nyaya inoteveraChii chinonzi AMM, Automated Market Maker?